अटेरी अभियानले शनिबार पोखरा लक्ष्य कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने - Prime News Nepal
अटेरी अभियानले शनिबार पोखरा लक्ष्य कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने
शनिबार अटेरी अभियानले पोखरा लक्ष्य कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ । स्थानीय तह दलरहित बनाउनुपर्ने मागसहित सुरु भएको अभियानले शनिबार पोखरा लक्ष्य कार्ययोजना २०७९ घोषणा गर्ने भएको हो ।
पोखराको सिर्जनाचोकस्थित रवि महलमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अटेरीका निर्वाचन अभियान संयोजक हरि कार्कीले जानकारी दिए । निर्वाचनका लागि विभिन्न वडाबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका अभियन्ताहरुले कार्यक्रममा सहभागी भएर उम्मेदवारीबारे प्रष्ट्याउने उनले बताए ।
‘कार्यक्रम मार्फत सहभागीहरुलाई अभियानबारे प्रष्ट पारिने छ । विभिन्न वडाबाठ उम्मेदवारी घोषणा गरि सकेका अभियन्ताहरुले आफ्नो उम्मेदवारी र अभियानबारे बारे कार्यक्रममा सहभागी अभियानका शुभेच्छुकहरुलाई बुझाउने छन्,’ संयोजक कार्कीले भने । पोखराबाट सुरु भएर देशव्यापी बनेको अटेरी अभियानमा अहिले २ सय बढीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी सार्वजनिक गरि सकेका छन् । ‘के हो अटेरी ? अटेरी अभियानलाई नै किन मत दिने ? यी विषयमा उम्मेदवारहरुले प्रष्ट्याउनु हुनेछ,’ संयोजक कार्कीले भने ।
अभियानप्रति बढेको चासोप्रति पनि कार्यक्रममा समेटिने उनले सुनाए । अटेरी अभियानको पोखराका गनेस पौडेलले महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर सुरु गरेका थिए । अहिलेसम्म पोखराका १० वडामा वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा समेत उम्मेदवारी घोषणा भई सकेको छ ।
साथै, कार्यक्रममा सहभागी भएर अभियानबारे बिस्तृत जानकारी लिन समेत उनले शुभेच्छुक पोखराबासि मतदाता, सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् ।